Amanani amaninzi kakhulu: Iingcaphuno ezingenakulibaleka zikaTomass Edison
Imbali kunye neNkcubeko Famous Inventors
Iimpawu eziqingqiweyo zeThomas Edison
UTomas Alva Edison wayengumvelisi waseMelika owazalwa ngoFebruwari 11, 1847. Ecingwa njengomnye wabasunguli ababalaseleyo kwiimbali zaseMerika, ubuchule bakhe busilethela i-bulb yokukhanya yosuku, yamandla kagesi, igrunograph, iikhamera zesikrini zokuhamba kunye neeprojekti, kunye .
Impumelelo yakhe kunye nobuchule bakhe bubangelwa yimbonakalo yakhe ekhethekileyo kunye nefilosofi yakhe, eyadumisa ngayo ubomi bakhe bonke.
Nantsi iqoqo elifutshane kwezinye zeengcaphuno zakhe eziphawulekayo.
Ngoxa u- Edison uhlala ecingwa njengomvelisi ophumelele kakhulu, uye wasikhumbuza ukuba ukungaphumeleli nokujongana nokuhluleka ngendlela enhle kuye kwaba yinyaniso kubo bonke abaqambi. Ngokomzekelo, u-Edison uqobo wayenamawaka angaphumeleli phambi kokuba enze i-bulb evulekileyo eyaphumelela. Ngoko kuye, indlela umvelisi aphatha ngayo ukungaphumeleki okungenakupheka okwenzekayo endleleni kungenza okanye uphule umendo wabo ukuya empumelelweni.
"Ubuninzi bokwehlukana kwezinto ngabantu abangazange baqonde indlela abasondele ngayo kwimpumelelo xa beyeka."
"Andizange ndiphumelele. Ndifumene iindlela eziliwaka ezilishumi ezingayi kusebenza."
"Ubuthakathaka bethu obuninzi bubangelwa ukuyeka. Indlela efanelekileyo yokuphumelela kukuzama ixesha elilodwa."
"Iziphumo ezingekho phantsi koko ndifuna zona, zibaluleke kakhulu kum njengemiphumo emihle. Andinakuze ndiyifumane into eyenzayo yinto endiyenzayo de ndiyifumane."
"Kungenxa yokuba into engenzi nto oyicebileyo ukuyenza akuthethi ukuba akunakunceda."
"Ukungaphumeleli kuyinto yokuzikhusela." Abantu abasebenzi kanzima kuba, ngokucinga kwabo, bacinga ukuba baya kuphumelela ngaphandle kokwenza umgudu .Abaninzi abantu bakholelwa ukuba baya kuvuka ngelinye ilanga baze bazityebi. , bayifanelekile isigxina, kuba ekugqibeleni bayavuka. "
Ndibonise umntu owanelisayo kwaye ndiya kukubonisa ukuhluleka. "
Kwixabiso lokuSebenza kanzima
Ngethuba lokuphila kwakhe, u- Edison wenza iimveliso ezili-1,093 zobunini. Kuthatha umsebenzi oqinileyo wokusebenza njengokuba unjalo kwaye ngokuqhelekileyo akuthethi ukubeka iintsuku ezingama-20 iiyure. Nangona kunjalo, u-Edison wayenandipha yonke imininingwana yomsebenzi wakhe onzima kwaye wathi, "Andizange ndenze umsebenzi wentsuku ebomini bam, kwakumnandi."
"I-Genius iphefumlelwe enye yepesenti kunye neyesithoba ezithoba kwipesenti."
"Imfuneko yokuqala yokuphumelela kukukwazi ukusebenzisa amandla akho emzimbeni nangokwengqondo kwingxaki enye ngaphandle kokukhathala."
"Sisoloko silahlekelwa ithuba ngenxa yokuba sigqoke kwii-overalls kwaye sibukeka njengomsebenzi."
"Ukuba sonke senza izinto esinakho, siyazibuza."
"Izinto ezintathu ezibalulekileyo zokuphumeza nantoni na into efanelekileyo, okokuqala, umsebenzi onzima;
"Ukuxakeka akusebenzi ngaso sonke isikhathi umsebenzi wokwenene. Into enomsebenzi wonke ngumveliso okanye ufezekiso kwaye kukho na kwezi ziphelo kufuneka kubekho ngaphambili, inkqubo, ukucwangcisa, ingqiqo, nenjongo yokunyaniseka, kunye nokuphefumula. ukwenza. "
"Umbono ngaphandle kokubulawa yi-hallucination."
Uninzi lwabantu abakwa-Edison bebanjengomntu onokuthi ulwalamano lwakhe nonina.
Njengomntwana, u-Edison wayejongwa njengothutho ngabafundisi bakhe, kodwa unina wayenemfundo ekhutheleyo kwaye wayeya esikolweni-esikolweni xa ootitshala bakhe besikolo sikarhulumente beyeke. Wayefundisa unyana wakhe ngaphezu kweenyaniso kunye namanani. Wayeyifundisa indlela yokufunda nendlela yokuba ngumcebisi obalaseleyo, ozimeleyo kunye novelisayo.
"Akukho mithetho apha, sizama ukufeza into ethile."
"Xa usuphelile onke amathuba, khumbula oku, awukho."
"Yintoni oya kubonisa kulokho ukwenzayo."
"Iipesenti ezintlanu zabantu bacinga; ipesenti ezilishumi zabantu bacinga ukuba bacinga; kwaye ezinye iingamashumi asibhozo anesithoba ziza kufa kunokucinga. "
"Ndiba nabahlobo kwi-overalls abahlobo bam andinakuyitshintsha ukuthanda kwabo ookumkani behlabathi."
"Ukubaluleka kwakho kukubandakanya oko ukhona kwaye kungekhona kwinto onayo."
Iingcebiso zeZiko elizayo
Okuthakazelisayo ngokwaneleyo, u-Edison wayenombono wendlela ebone ngayo ikamva elicebileyo.
Izicatshulwa kweli candelo ziyasebenza, zinzulu kwaye ziprofeto.
"Sifana namafama aqeshisa ukucima ucingo ojikeleze indlu yethu ukuba sitshise xa sifanele sisebenzise imithombo engapheliyo yamandla - ilanga, umoya kunye nomoya." Ndayifaka imali yam ilanga namandla omhlaba . Amandla! Ndiyathemba ukuba asilinde ukuba ioli neelahle ziphele phambi kokuba senze oko. "
Umsebenzi owona mfuneko wenkqubela phambili ukufundisa abantu indlela yokucinga, kufuneka ibe yinjongo ephambili yezikolo zikarhulumente. Ingqondo yomntwana isebenza ngokusesikweni, iyaqhubeka nokuzivocavoca. Ingxaki ngendlela yethu yokufundisa kukuba ayiyi kunika ingqondo kwi-ingqondo, ibangela ukuba ingqondo ibe yintonga. kwimemori kunokugqithisa. "
"Ugqirha lwexesha elizayo aliyi kunika amayeza, kodwa uya kuba nomdla kwizigulane zakhe ekunyamekeleni isakhelo somntu, ukutya kunye nelokukhusela nokukhusela izifo."
"Ukungabikho gonyamelo kubangela ukuziphatha okuphezulu, okuyiyo injongo yokuziphendukela kwemvelo. Kuze kube yilapho siyeke ukulimaza zonke izidalwa eziphilayo, sisasazi."
"Ndiyaziqhenya ngokuba andizange ndivelise izixhobo zokubulala."
"Kuya kubakho olunye usuku oluvela kwingqondo yesayensi umatshini okanye uloyiko olwesabayo kwiindawo zalo, ngokoloyikeka kakhulu, ukuba umntu, umloli, oza kubakhombisa ukuhlushwa nokufa ukuze ahlushwe aze abulawe, uya kumangaliswa, kwaye ke ukushiya imfazwe ngonaphakade. "
Iingxelo eziphezulu kakhulu zikaHenry Ford
UBenjamin Franklin kunye namaxesha akhe
I-Biography ye-Orville Wright
UJohnnes Kepler - I-Astronomy
ULyda Newman ucela i-Vented Brush
Imfazwe yoMlambo weMlambo - iMfazwe Yehlabathi II
Ukuxhaswa kweMatyala okuXholwa kweMatyala Ukuxhatshazwa kwabathengi ngeeMali eziMkhulu kunye noNcedo lweMatyala
Ukukhipha isisu Ukuthetha
Imiboniso ye-Hexafluoride yeSulfulf
Izixhobo zeMzimba eMandarin - I-Torso
INgqungquthela ye-No-Flag Press Conference
Abamkelekileyo beeKholeji zeBholeji zeBhole
Imephu yeeHotspots zeHlabathi
Iingcebiso zoPhumelelo lwaBantwana bamaKhaya
Inkampani kaMarta Graham Dance
Iingqungquthela ze-Classic ezibekwe kuMculo